LG K42 gosipụtara: imewe, atụmatụ na ọnụahịa gọọmentị | Gam akporosis
LG K42, ọkwa dị n'etiti ọhụụ na imewe ọhụrụ
Ikpeazụ July, na Google Play njikwa kpughere ihe nzuzo nke ọhụrụ ya ngwaọrụ, na LG K42, nke na-aga ịrịọ ka ọ hụ ìhè. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ Korea na-eme ka ọ bụrụ onye isi, na ugboro abụọ, ebe ọ bụ na ọ gosipụtara ya n'okpuru aha abụọ, dabere na mpaghara ọ ga-abụ LG K42 ma ọ bụ LG Q42.
LGK42 ohuru a bu ohuru ohuru nke liwu iji dochie LG K41s nke ọnwa Febụwarị bụ imepụta ọhụụ na mgbanwe ndị ọzọ na nkọwa ya, dịka ntinye nke onye na-agụ akara mkpịsị aka n'akụkụ na nhụjuanya na ihuenyo ahụ, na ihe ndị ọzọ.
LG K42: Ntinye ntinye na imepụta ọhụrụ
Mgbe ị na-atụnyere mpempe akwụkwọ teknụzụ nke LG K42 na nke ụdị gara aga, LG K41s, nke ewepụtara ọnwa ole na ole gara aga, anyị nwere ike ịhụ na enweghị nnukwu esemokwu dị n'etiti ha. Ha abụọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ, na-ewepu obere ole na ole, mana ha nwere usoro dị iche. Nke a agbanweela nnukwu mgbanwe site n'ọgbọ gara aga.
Malite na igwefoto, ọ na-ahapụ usoro ọdịnala nke akara LG, nke dị larịị. Ugbu a, na ụlọ ọrụ Korea ha nzọ na akụkụ akụkụ anọ nwere akụkụ gbara gburugburu. E tinyekwala ngbanwe a na nhazi nke azụ ya, nke nwere ụdị wavy mbụ.
Ihe ọzọ nke gbanwere na LG K42 ọhụrụ bụ ihuenyo ya, LCD. Ọ nwere HD + mkpebi na a size nke 6,6 sentimita asatọ. Igwefoto ya n'ihu bụ megapixels 8 ma dị na oghere dị n'etiti etiti elu ihuenyo ahụ. N'aka nke ọzọ, na LG K41s, igwefoto pụtara na ọkwa dị ka ọdịda.
Eeh, dị ka ị si hụ, igwefoto ha agbanweela atụmatụ ha, mana ha nwere otu njirimara dị ka ihe atụ gara aga, LG K41s. Ọ bụ igwefoto quad nwere ihe mmetụta 13 megapixel isi, eserese eserese, eserese megapixel 5 na ihe mmetụta abụọ megapixel abụọ maka foto nnukwu.
Ọ bụ ndị Helio P22 si MediaTek, nwere 3GB RAM na 64GB nchekwa. Fa batri ho, na fa afotu ma 4.000. Akara mkpisiaka nke ụdị ọhụrụ ahụ dị n'akụkụ. Ọ nwere njikọ USB-C, bọtịnụ anụ ahụ iji kpọọ Google Assistant, minijack na MIL-STD-810G iguzogide asambodo.
Ruo ugbu a, LG ekwupụtala naanị LG K42 na Central America, mana enyebeghị ozi banyere nnweta ya ma ọ bụ ọnụahịa ya na mpaghara a ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ. Mana ihe amara bụ na ọ ga-adị na agba abụọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ntụ, ha abụọ nwere otu mmetụta dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG K42, ọkwa dị n'etiti ọhụụ na imewe ọhụrụ
Samsung Galaxy S8 na-enweta mmelite nche ọhụrụ
The OnePlus 5 na 5T na-eche nnukwu mmelite, mana nke a egbuola oge site na nsogbu